China Wholesale YG Zipper Slider, Zinc Alloy Lock Slider Vatengesi, Vagadziri - GRX GARMENT (HONG KONG) CO., LTD.
GRX GARMENT (HONG KONG) CO., LTD: Isu tinozivikanwa seimwe yeanonyanya kuita Slider vatengesi muChina. Ndapota inzwa wakasununguka kutenga kana zvigadzirwa zvepamusoro zvemhando yepamusoro pamakwikwi mutengo pano uye uwane kotora kubva kufekitori yedu. Kuti uwane rumwe ruzivo rwekubvisa, taura nesu izvozvi.
Iyi yerubber core inogadzirwa nepurasitiki. Iyo kambani yapfuura ISO9001: 2008 mhando manejimendi manejimendi sisitimu. Iyo ine akati wandei patents. Zvese zvigadzirwa zvave SGS yakaedzwa uye yakaiswa mumusika mushure mekupasa bvunzo. Iyo yakakwana chigadzirwa mhando manejimendi system yakaunzwa. Na......
Iyi mbambo yealuminium inogadzirwa nealuminium. Iyo kambani yapfuura iyo ISO9001: 2008 mhando manejimendi manejimendi sisitimu. Iyo ine akati wandei patents. Zvese zvigadzirwa zvakapasa bvunzo yeSGS uye ndokuisa mumusika mushure mekupasa bvunzo. Iyo yakakwana chigadzirwa mhando manejimendi system ya......
I-bhatani repazasi goko
Goko repazasi rebhatani iri rakagadzirwa nesimbi isina tsvina uye mhangura. Iyo kambani yapfuura ISO9001: 2008 mhando manejimendi manejimendi sisitimu. Iyo ine akati wandei patents. Zvese zvigadzirwa zvave SGS yakaedzwa uye ikaiswa pamusika mushure mekupasa bvunzo. Iyo mhando yechigadzirwa inotenges......